Clément Shala waxay u sameysay electro-brazier dumarka Kongo - AFRIKHEPRI
Clément Shala waxay u sameysay electro-brazier dumarka Kongo
in BARNAAMIJYADA CIIDAMADA IYO GARGAARKA
Waxaad ku jawaabtay "Clément Shala waxay abuurtay electro-brazier ee ..." Dhowr daqiiqo ka hor
Clément Shala, Congolese oo ka socda Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo (DRC) ayaa soo saarey qalab elektro-brazier ah oo uu ka sameeyay qaybaha dib u soo kabashada. Mashiinka waxaa laga sameeyaa qaybo ka mid ah dib loo soo celiyay cajaladaha iyo CD-yada. Mishiinkan wuxuu ku shaqeeyaa fan ku jira firfircoonida dhinacyada dabka, laftiisa ayaa laga sameeyey kaluumeyaal aan qofna isticmaalin. Mashiinka waxaa ku shaqeeya 2 isticmaalay batariyada korantada.
Ilaa hadda, inta badan Cunto-ga ayaa ku karsiiya dhuxul, oo ah shidaal qaali ah oo inta badan ka mid ah Congolese iyo gaar ahaan mid aan caqli-gal ahayn. Sida qoraaga brazier-ku leeyahay, muusigiisuna wuxuu suurtogal u yahay in ay xaddiddo qoryaha dhirta muddo sannad ah.
Waayo, hadda, wax caawimaad ah ka gobolka Congo yimid dhiiri-soo-saarka hindisa iyo warshadaha tani ma aha dhow haddii Africans iyo gaar ahaan qurba joogta gacmahooda jeebka si ay u caawiyaan wiilkan geesi laga soo bilaabo Kemet (Afrika). nuqulo dhowr ah oo braséro lagu iibin aan advertising wax kharash ah oo € 15 ama 9839,35 CFA francs bil dhuxusha Congo celceliska.
Maqaalkan ayaa horey loo wadaagay 78 jeer!
Halkan guji si aad u dhajiso maqaalkaaga ...